Ny fomba tsara indrindra hisorohana ny fifanolanana amin'ny fifanarahana UAE: dingana 4 azonao atao anio. 0000
Inona no fomba tsara indrindra hisorohana ny fifanolanana amin'ny fifanarahana UAE? Ireto ny dingana 4 azonao atao anio.
Rehefa mifindra any UAE, ny ankamaroan'ny olona dia maniry ny fifanolanana amin'ny fifanolanana amin'ny mpisolovava iray eo an-toerana. Saingy alohan'ny handraisanao fanapahan-kevitra momba ny fisoloan-tena ara-dalàna dia ilaina ny mahatakatra ny atao hoe “fifanolanana amin'ny fifanarahana” sy ny fomba hitrangan'izany. Nandany fotoana izahay hanangonana fomba 4 tsara indrindra hisorohana ny fifanolanana amin'ny fifanarahana izay hanampy anao hamaha ny olana hatrany an-dàlana mba hahafahanao mifantoka amin'ny hipetraka ao amin'ny firenena vaovao.
Manjaka ny fifanolanana amin'ny fifanarahana eo amin'ny tontolon'ny asa ankehitriny noho ny faneken'ny olona sy ny fandikana izany.
Izany dia vokatry ny toe-javatra toy ny; drafitra tsy mety amin'ny fiandohan'ny fifanarahana sy ny fehezan-kevitry ny fifanarahana tsy mazava amin'ny antoko amin'ny lafiny fanekena lehibe. Ireo fehezan-teny ireo dia mety misy famaritana ny tolotra fifanarahana ataon'ny antoko iray. Ny fifanakalozana fiheverana dia mety tsy ho faritana tsara amin'ny andaniny sy ny ankilany izay mitarika fisarahana lehibe satria ny fiheverana dia anton-javatra lehibe satria midika zavatra manan-danja izany.
Ny fifanarahana dia mety ho tsy ara-dalàna, noho izany mahatonga ny antoko tsy hahomby amin'ny fe-potoana sy fe-potoana iasanany noho ny loza mety hitranga amin'ny orinasa.
Mety ho hafa ny fifanekena lesoka sy famafana, izay mahatonga antoko iray hanohitra ny fifanarahana noho ny a fahazoan-kevitra ny foto-kevitra. Ny vinavina voafaritra tsy voafaritra sy tsy feno dia mitarika amin'ny tetibola mihoatra ny vola antenaina. Manomboka very fahatokisana ny orinasa ireo mpanjifa satria heverin'izy ireo fa nampiasaina tamin'ny fomba ratsy ny volany, izay fanitsakitsahana ny fe-potoan'ny fifanarahana.
Raha te hanana fifanarahana dia tsy maintsy mandinika teny ianao ary manamarika tsara ny zavatra hahafahanao misoroka ny fifanolanana amin'ny fifanarahana izay misy fiatraikany lehibe amin'ny andaniny roa.
Mba hisorohana ny fifanolanana amin'ny fifanarahana dia misy antony maromaro tokony hodinihina ary ireto dia ireto:
Tokony manatona mpisolovava iray ianao.
Alohan'ny hidirana amin'ny fifanarahana rehetra dia tokony hifandray amin'ny mpisolovava anao ianao handinika ara-dalàna. Ny mpisolovava dia tokony hijery ny maha-ara-dalàna ny fifanarahana, ny fepetra voafaritra tsara ary ny fahalianana amin'izany raharaha izany. Tokony hanao izany koa izy maminavina ny valin'ny fifanarahana raha ny lafiny iray tsy mahomby ary ny fomba hiatrehana ireo olana mety hiteraka fahasamihafana ary ilaina raisina amina tranga iray fitsarana.
2. Soraty ny fifanarahana
Tsy maintsy atao izany manaova fifanarahana amin'ny fanampiana a mpisolo vava. Ny sasany manao fifanarahana fifanarahana tsy voasoratra satria izy ireo dia manana fifandraisana akaiky na fifandraisana akaiky amin'ilay olona nifanarahana taminy. Miteraka fifandirana marobe izany satria tsy misy porofo raha toa ka raisina amin'ny raharaham-pitsarana izany. Amin'ny alàlan'ny fanoratana volavolan-dalàna, dia hita taratra ny fahalianana sy ny fiovana fohy amin'ny fifanarahana rehetra.
3. hazavao ny mety ho fandikana diso
Alohan'ny hanaovana sonia fifanarahana rehetra dia tsy maintsy mamaky ianao ary mahatakatra azy mba hialana amin'ny fandikana diso azy io. Izany dia hiantohana fa azonao tsara ny teny ary voamarina raha efa nojerena ny faritra mahaliana anao. Mahatonga ny roa tonta ho vonona hiasa tanteraka ao anatin'ny fetran'ny fifanarahana. Tsy maintsy jerenao raha manana ny mpiasa ilaina rehetra nanaiky sy nanao sonia ny anjarany araka ny takian'ny fifanarahana. Ny fifanarahana dia tokony ho amin'ny fiteny mazava, mora vakina ary tsy manjavozavo satria ampiasaina ho torolàlana mandritra ny vanim-potoanan'ny fifanarahana.
Izy io koa dia tokony handrakotra ny faritra onitra sy ny vidiny raha sendra misy vola na olana tsy ampoizina ao anatin'ny vanim-potoanan'ny fifanarahana. Mivoaka mazava ny fandikana diso rehefa samy manana ny heviny momba ny fifanarahana ny roa tonta
4. Fantaro ny zonao sy ny andraikitrao
Zava-dehibe ny fahafantarana ny zavatra antenaina iraisan'ny roa tonta sy ny andraikitr'izy ireo amin'ny fifanarahana. Ilaina izany Ny fisorohana ny fandikana ny voalazan'ny fifanarahana dia tsy hita taratra izay fifanarahana nifanarahana. Ny paikady iray dia tokony hapetraka amin'ny andraikitry ny olona hamahana ny tsy fitovian-kevitra raha toa izy ireo. Hanavotra ny fotoana sy ny vola ary ny fifandraisan'ny roa tonta tsy rovitra amin'ny fifandirana.
Ny fifanarahana dia tokony hamaritra tsara raha tokony ho vola ny adidy amin'ny serivisy omena ary tokony omena ny masontsivana momba ny serivisy. Tokony hoheverinao ihany koa raha miaro ny ahiahy tsirairay ny fifanarahana arakaraka ny andraikitrao.
Ianao dia tokony mametraka fitsipika sy fitsipika sasany, izay azo dinihina mba hamaranana ny fifanarahana aloha. Izany fihetsika izany dia vokatry ny antony sy toe-javatra samihafa izay miteraka ady. Ny fitazonana ny firaketana ny fifanarahana nataonao toy ny antso an-tariby, mailaka, taratasim-bola ary faktiora dia ilaina mba hahazoana antoka fa nahomby ny fizotran'ny fifanarahana. Tokony ho azonao antoka koa fa azo idirana mora foana izy ireo. Ny fanaovana teti-bola ho an'ny tetikasa alohan'ny hanombohanao miasa amin'izany dia manampy amin'ny fanombanana ny drafitra ilaina ary hiomanana amin'ny toe-javatra maika tsy azo ihodivirana.
Manampy amin'ny fisorohana ny fifanolanana amin'ny fandaniam-bola sy fandoavam-bola izay nanjary fanamby lehibe tamin'ny fifanarahana maro izany satria matetika ny vola no fototry ny ankamaroan'ny tohan-kevitra amin'ny orinasa Dubai na ny Emirà Arabo Mitambatra.
fandinihana dia fe-potoana voalohany amin'ny tombony azo nampanantenain'ny roa tonta ao anatin'ny fifanarahana. Tokony hisy ny fandinihana ny serivisy ankehitriny; ireo no tombony azo ankehitriny miaraka amin'ny fampanantenana. Ohatra iray ny fandoavana serivisy natolotra araka ny fifanarahana. Ny fiheverana dia fifanarahana fanonerana izay natao taorian'ny nahazoany tombony tamin'ny serivisy. Napetrakao ao an-tsaina ihany koa ireo fiheverana ho avy izay tombony ho an'ny roa tonta.
Raha te hanana fifanarahana dia tsy maintsy mandinika teny ianao ary mitadidinika tsara izay zavatra ahafahanao manao sorohy ny fifanolanana izay misy fiatraikany ratsy amin'ny lafiny roa, ao anatin'izany fahaverezana vola amin'ny asa aman-draharaha sy ny fizotry ny lalàna ary ny tsy fahatokisan-tena eo amin'ny ankolafy. Mety hanampy raha maka fotoana hamoronana andalana ianao hahazoana antoka fa io lafiny io dia hijanona ho velona amin'ny ho avy. Amin'izany dia ho azonao atao ny misoroka ny fifanarahana ara-barotra Litigation amin'ny karazany rehetra.
Aorian'ireo dingana ireo, ny roa tonta dia handalo dingan-dàlana amin'ny famahana ny fifanolanana izay dinihina ny forum, ny toerana, ny lalàna manan-danja ary ny lalàna mifehy.
Ho famaranana, ny famahana ny fifanolanana dia azo ampiharina, mamatotra ary mandaitra rehefa mamela ny antoko hiaro ny fifandraisana miasa.